Hetsika amin'ny 26 Oktobra 2021 - Tsidiho i Hultsfred
Hetsika amin'ny 30 Novambra 2021
Ny fanovana ny iray amin'ireo firaketana an-tsoratra dia hahatonga ny lisitry ny hetsika havaozina miaraka amin'ny valiny voasivana.
Sivana misokatra	Manakatona sivana
Jereo ny hetsika rehetra
Hetsika an-tserasera ihany no aseho
Afeno ny hetsika an-tserasera rehetra
2021-10-26	26 Oktobra, 2021
26 Oktobra amin'ny 10 ora alina. - 12: 00	 miverimberina
Mandeha avaratra amin'ny Lönnebergaboa
Fitsangatsanganana an-tongotra any Lönneberga Boa / Silverdalen efitrano fanatanjahan-tena talata amin'ny 10 maraina Info: Birgitta 070-646 78 46
26 Oktobra amin'ny 11 ora alina. - 13: 00	 miverimberina
Mandeha avaratra amin'ny kioska Avaratra
Kiosko avaratra	Storgatan 131, Hultsfred
Nandeha an-tongotra Nordic "Norra kiosken" Hultsfred talata tamin'ny 11 Info: Carin 070-304 57 22
26 Oktobra amin'ny 14 ora alina. - 16: 00	 miverimberina
Hiverina any amin'ny Digitek
Tranombokin'i Hultsfred	Västra Långgatan 46, Hultsfred
Alatsinainy 10-12 talata 14-16 Nandritra ny fidinana an-tsokosoko dia afaka mahazo fanampiana ny mponin'ny tanàna mba hahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny mety hisian'ny digitalisation. Ny mpiasa ao amin'ny tranokala dia afaka manampy, ohatra, amin'ny famandrihana
26 Oktobra amin'ny 16 ora alina. - 17: 00
Tongasoa eto amin'ny faritry ny fitehirizam-boky Ny lohahevitry ny fararano dia: “Islandy” Amin'ny 26 Oktobra dia hovakinay ny mpanoratra hoe Sjón, “Ilay zazalahy tsy nisy”. Ny boky dia azo indramina amin'ny trano famakiam-boky Ny boky faribolana no
26 Oktobra amin'ny 18 ora alina. - 20: 27
Bio Hultsfred - Fihodinana iray hafa
Valhall	Stora Torget 2, Hultfred
Misy teoria milaza fa teraka kely dia kely ny antsasaky ny mille ny olona. Fantatsika rehetra fa ny alikaola ao anaty ra dia manokatra ny saina amin'ny any ivelany, toa ny olana